Wararka - Doorashada Qalabka iyo Hababka ugu Fiican Mashiinnada Baakadaha
Doorashada Qalabka iyo Hababka ugu Fiican Mashiinnada Baakadaha
Markaad raadineyso mashiinada baakadaha, waxa kaliya ee fiican ayaa sameyn doona. Mashiinnada ganacsigaaga ayaa ka badan maalgashi bilow ah. Waxay sameyn kartaa ama jebin kartaa mustaqbalka shirkaddaada. Sidaa darteed waxaad dooneysaa inaad doorato mashiinada baakadaha ee lagu dhisay qalabka ugu tayada sareeya. Haddii aad xiiseyneyso casriyeynta mashiinnada duugoobay ama ballaadhinta xariiqda wax soo saarka ee hadda jirta, adeegso tusahan si uu kaaga caawiyo inaad xulasho sax ah ku yeelato qalabka. Shirkadda GAOGE waxay ku siin kartaa adeegyo tayo sare leh oo loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudahaaga waxayna kuu dammaanad qaadayaan tayada mashiinka
Bir aan xadi lahayn ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qaybaha mashiinka, oo ay ku jiraan jir, meelaha taabashada alaabta, iyo xaaladaha qalabka fayadhowrka, qalabka oo dhan. Qalabkan waxaa loo xushay adkeysigiisa iyo xooggiisa. Ahama sidoo kale faa'iido qalabka baakadaha by ay daxalka kordhay- iyo iska caabin ah qiiqa. Si kale haddii loo dhigo, birta birta ah uma daxalaysato sida ugu fudud ee biraha kale. Waxay u adkeysaneysaa nadiifinta cadaadiska sare, dareerayaasha, boodhka, qoyaanka, iyo walxaha kale ee keena qoyaanka. Waa sababihii hore oo dhan markii la dooranayo qalab loogu talagalay in lagu rakibo qalabka mashiinka, birta aan fiicnayn ayaa ah doorashada ugu sareysa xaaladaha badankood.
Markay tahay in la jiido qalabka suunka loo adeegsado mashiinada wax lagu rito, waxaa jira hal bir oo dadka ka dhex muuqda. Aluminium ahaan bir ahaan waxaa lagu qiimeeyaa culeyskiisa fudud iyo xooggiisa weyn. Intaa waxaa sii dheer, waa birta inta badan la isticmaalo. Haddii aad raadineyso biro jawi-saaxiibtinimo leh, iyada oo ay ugu wacan tahay faro-badankeeda ku jira dhulka hoostiisa, aluminium ayaa ugu yar inay u badan tahay in la miino-xaabiyo.
Marka aluminium loo subagsiiyo baakadaha qaybo mashiinno ah, xooggiisa si weyn ayaa loo kordhiyaa. Sida laga soo xigtay Golaha Anodizers Aluminium, “Ujeedada anodizing waa in la sameeyo lakab aluminium oksaydh ah oo ilaalin doona aluminium ka hooseeya. Lakabka aluminium ee oksaydhku wuxuu leeyahay daxad iyo u adkaysiga abrasion ka badan aluminium. ” Sababtaas awgeed, aluminium anodized ah ayaa ku habboon marka loo isticmaalo jiido jiidista suunka qayb ka mid ah mashiinnada baakadaha. Iskusoo wada duuboo, qulqulatooyinka laga sameeyay aluminiumka anodized ayaa kasii dari doona heer aad uga gaabiya kuwa kale ee laga sameeyo waxyaabaha kale sida balaastigga.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo in mashiinnada baakadaha ee sida gaarka ah loo sameeyay ay sii soconayaan ayaa ah iyadoo la fududeeyo qeybaheeda lana hubiyo inay yihiin kuwo qaabaysan oo aan lahaansho lahayn. Ka soo horjeedda mararka qaarkood aaminaadda caanka ah, markay timaado qalabka wax lagu duubo, fudud ayaa had iyo jeer ka fiican. Maaddaama qaybo badan iyo kakanaanta lagu dhisay mashiin, tani waxay kordhineysaa fursadaha arrimaha yar yar ay ku weynaadaan markay dhibaatooyinku soo baxaan. Intaa waxaa sii dheer, adoo dooranaya agab ka xoog badan sida aluminium iyo bir qaybo ka mid ah, qalabka mashiinku wuxuu u baahan doonaa beddelaad yar.
Hadda oo aad ogtahay waxa aad ka raadinayso mashiinnada baakadaha, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo u adeegashada qalabkaaga xiga. Baadh boggeena internetka si aad u hubiso waxa aan ku siineyno makiinado wax lagu duubi karo, fudud, oo waara. Nala soo xiriir si aan u sameyno la-talin ama aan u ogaano wax badan oo ku saabsan qalabka ugu fiican ee laga raadsado mashiinnada baakadaha.